Nanaovan’ny Hong Kongey Fihetsiketsehana Miendrika Selfie ny “Fampirantiana” Mozean’ny Lapa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2017 4:45 GMT
Mpanao fihetsiketsehana naka tahaka ny fihetsiketsehana demokrasian'ny mpianatra tamin'ny taona 1989 tao Beijing teo anoloan'ny Fampiratiana ny Mozean'ny Lapa. Sary avy amin'i Melissa Maize ao amin'ny HKFP. Nahazoana alalana.
Raha ao Hong Kong ianao ankehitriny, dia hahita ny sarin'ny Mozean'ny Lapa Beijing amin'ny afisy goavambe sasany ao amin'ny garan'ny metro. Mety haka selfie eo anoloan'ny dokambarotra ianao, miaraka amin'ny fihetsika kelin'ny fihetsiketsehana -tahaka ny nataon'ireo Hongkongey tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo.
Ny fanentanana, na ny “fampiratiana”, araka ny iantsoan'ny fanjakana Hong Kong azy, dia natao handresen-dahatra ny vahoaka fa tokony hirehareha amin'ny fananganana tetikasa Mozean'ny Lapa ao amin'ny Distrika Ara-kolontsaina Kowloon Andrefana ao Hong Kong, izay nandanian'ny fanjakana HK $1.580.000 na 200.000 dolara Amerikana izy ireo.
Nambaran'ny Sekretera Lehiben'ny governemanta, Carrie Lam, tamin'ny 23 Desambra 2016 ny tetikasa mampiadi-hevitra, izay tsy nandalo dingana fakàna hevi-bahoaka. Nanambara i Lam fa avy amin'ny “karajia” niarahana tamin'ny manampahefana tao Beijing tamin'ny Septambra 2015 ny hevitra.
Mba hiantohana fa tsy ho voakorontana ny tetikasa, ka tsy hampandalovina ao amin'ny Vaomieran'ny Fanaovan-Dalàna ho fankatoavana ny tetibolan'ny tetikasa vaovao. Nahaantoka fanomezana 3,5 tapitrisa dolara avy amin'ny Klioba Jockey Hong Kong i Lam, izay filohan'ny Filan-Kevi-Pitantanan'ny Distrika Ara-Kolontsainan'i Kowloon Andrefana (WKCDA) ihany koa.
Tonga tao an-doha ny hevitra raha nahatsikaritra ny sehatra mpanao fanadihadiana fa nanakarama an'i Rocco Yim, mpahay maritrano fanta-daza, ny WKCDA hanoritsoritra ny sary voalohan'ny mozea tamin'ny Jiona 2016, ary tsy nisy ny fanaovana tolo-bidy misokatra ho an'ny daholobe. Namoaka ny fehin'ny tetikasa ho an'ireo mpikambana hafa ao amin'ny filan-kevi-pitantanan'ny WKCDA ihany koa i Lam volana vitsy taty aoriana, tamin'ny Oktobra sy Novambra 2016.
Tonga tamin'ny taona 1998 ny hevitra WKCD; nanomboka teo, notantanina tamin'ny fomba malalaka sy mangarahara tamin'ny alalan'ny antso tolo-bidy ho an'ny rehetra, fifaninana sary ary fakana ny hevi-bahoaka ny fanapahan-kevitra momba ny fampandrosoana ny distrika. Fahefana vatsian'ny fanjakana ara-bola ny WKCDA, naorina tamin'ny taona 2008 teo ambanin'ny Fahefan'ny Distrika Ara-Kolontsaina Kowloon Andrefana, izay milaza miharihary fa:
Ny Fahefana dia tokony haka ny hevitry ny vahoaka amin'ny fotoana sy amin'ny fomba hitany fa mety, rehefa misy ny fampandrosoana na hetsika ara-java-kanto sy ny fitaovana ara-kolontsaina, ny fitaovana mifandraika amin'izany, ny fitaovana sy ny lohahevitra hafa.
Raha nilaza i Carrie Lam fa mahatafiditra “torohay saro-pady” ny tetikasa ka noho izany tsy tokony havoaka amin'ny vahoaka, dia nanapa-kevitra hitondra ny raharaha tany amin'ny fitsarana mba hodidinihana ara-pitsarana ireo olom-pirenena voakasika.
Tao anatin'ny fiadian-kevitra, nanohy nampiroborobo ny tetikasa tamin'ny fandaniana 3,8 tapitrisa dolara HK tamin'ny fandaharana tantara mitohy amin'ny fahitalavitra isaky ny farany herinandro, mitondra ny lohateny hoe “Mifandray Amin'ny Mozean'ny Lapa”, ny governemanta, sy vola 1,58 tapitrisa dolara HK tamin'ny dokambarotra afisy goavambe tao amin'ny foiben'ny garan'ny metro mba hampiroboroboana ny fandaharana tantara mitohy. Nilaza ny fanjakana taty aoriana fa “fampiratiana” fa tsy dokambarotra ny afisy ao amin'ny garan'ny metro.
Hatramin'ny naha-kandidà mety hirotsaka hofidianana Filoha Mpanatanteraka an'i Carrie Lam tamin'ny volana Mey. nosokajiana ho fanentanam-pifidianany ny Tetikasa Lapa, izay nanehoany ny fitiavan-tanindrazany sy ny fahafahany mitantana ny tanàna.
Satria ny afisy dia mampiseho ara-bakiteny hoe “Ny Tanàna Tsy Azo Idirana” – toerana izay manamarika ny endri-pitantanana imperialin'i Shina sy mampatsiahy ny vahoaka ny famoretana tamin'ny fihetsiketsehana demokratikan'ny mpianatra tamin'ny taona 1989 — tao Hong Kong, nanapa-kevitra hanangana hetsi-pijoroana kely teo anoloan'ny fampiratiana ny Hong Kongey sasany, ary nizara ny selfian'izy ireo tao amin'ny media sosialy.
Tao anatin'ny andro vitsivitsy, tao anatin'ny faribolan'ny Facebook ao Hong Kong, afaka mahita fiara mifono vy mandehandeha manerana ny “Tanàna Tsy Azo Idirana” ianao :
Sary nalaza tao amin'ny Facebook: Fiara mifono vy mandehandeha manerana ny “Tanàna Voaràra” ao amin'ny gara foiben'ny metro ao Hong Kong.
Nampiseho teny filamatra ny mpanao fihetsiketsehana sasany:
“Manaova valifaty amin'ny hetsika demokratikan'ny taona 1989, tazony ireo izay nanome baiko tamin'ny vono olona.” Avy amin'ilay mpisera Facebook Wai Hung Chow.
Ny hafa kosa nihazona ny dika mitovin'ny Sarivongan'ny Demokrasia teo anoloan'ny “Tanàna Voaràra”:
Sary avy amin'ilay mpisera Facebook Wai Hung Chow
Noraisin'ny vondrona ara-politika Firaisankinan'i Hong Kong ho Fanohanana ny Hetsika Demokratika Tia Tanindrazana ny fisarantarana andraikitry ny olom-pirenena sy ny disovohana bebe kokoa ny fampiratiana. Tamin'ny 9 Janoary 2017, naka tahaka ny fihetsiketsehana tamin'ny taona 1989 koa izy ireo tamin'ny alalan'ny fiantsoantsoana ny teny filamatra mitaky ny famotsorana ireo gadra politika, anisan'izany ilay Mendrika tamin'ny Loka Nobel-n'ny Fandriampahalemana Liu Xiaobo:
Tao anatin'ny endrika fanehoan-kevitra mampiavaka ny fihetsiketsehana, mpamaky iray tao amin'ny takelaka fanehoan-kevitry ny HKFP nanamarika hoe:
Odry, izay noheverina ho sehatry sezam-boninahitry ny Filoha Mpanatanteraka tany am-boalohany ity no lasa toerana vaovao fanaovana fihetsiketsehana ankehitriny. Fahaiza-mamoron'ny fetsifetsy! Fikorontanana vaovao hanadiovana an'i Lam